इन्टरनेट–वर्तमानको आवश्यकता | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ इन्टरनेट–वर्तमानको आवश्यकता
इन्टरनेट शब्द आज कसैको लागि नौलो होइन । ठूलादेखि सानासम्म सबैले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । कोरोनाकालमा यो संवाद र सामान्य जीवनको विकल्प बनेको छ । इन्टरनेटको माध्यमले जागीरेहरूले घरमैं बसी जागीर जोगाएका छन् भने केटाकेटीहरूको लागि यो वरदान नै साबित भएको छ । आज धेरैजसो विद्यार्थी यसकै सहायताले आफूलाई कोरानाबाट जोगाउँदै घरमैं शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् ।
इन्टरनेटले सजिलो बनाइदिएको छ । १०० वर्ष पहिले कसैले यसबारे कल्पना पनि गरेको थिएन। आज मानिसले इन्टरनेटबाट विश्वभरिको जानकारीका साथै एउटै ठाउँमा कैयन सुविधा उपलब्ध गरेको छ । वर्तमान समयमा इन्टरनेट विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय नेटवर्क बनिसकेको छ । आज इन्टरनेटबेगर बाँच्न गा¥हो भइसकेको छ । विश्वका सबै नेटवर्क इन्टरनेटसँग जोडिएको हुनाले यसलाई ‘नेटवर्कको नेटवर्क’ पनि भन्न सकिन्छ ।
यो आइ.टी क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क हो । यसलाई छोटकरीमा ‘नेट’ पनि भनिन्छ किनभने इन्टरनेट एकअर्कासँग जोडिएको धेरै कम्प्युटरहरूको जालो हो जुन उपग्रह, फाइबर प्रणाली, एल.ए.एन. र बी.ए.एन प्रणाली तथा टेलिफोनको माध्यमबाट सम्पूर्ण विश्वको करोडौं कम्प्युटर तथा उपनेटवर्कलाई एक आपसमा जोेड्छ । अर्थात् सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रक्रियालाई इन्टरनेट भनिन्छ ।
पहिले इन्टरनेट नहुँदा मानिसलाई सामान्य कामको लागि पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपथ्र्यो र कैयन प्रकारका परेशानी बेहोर्नुपर्दथ्र्यो । आज एउटा औंलाको भरमा धेरै काम हुन्छ । इन्टरनेट आपैmंमा कुनै आविष्कार होइन । यो टेलिफोन, कम्प्युटर र अन्य टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बनाइएको एउटा सञ्जाल मात्र हो जसमा सूचना र टेक्जोलोजीको साझा प्रयोग गरिएको छ । सन् १९६९ मा टिम बन्र्स लीले इन्टरनेट विकास गरे ।
यसलाई सबैभन्दा पहिले अमेरिकाको प्रतिरक्षा विभागको एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सीले गुप्त तथ्याङ्क र सूचना टाढाका विभिन्न राज्यमा पठाउने र प्राप्त गर्ने काममा प्रयोग गरेको थियो । सन् १९८४ मा एप्पल कम्पनीले कम्प्युटरमा फाइल फोल्डर र ग्राफिक्सको उपयोग ग¥यो जसले गर्दा आज इन्टरनेट चलाउन सजिलो भएको छ । जसैजसै कम्प्यूटरको विकास हुँदै गयो, त्यसमा भएको तथ्याङ्क र सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो र यसकै लागि विभिन्न विश्वविद्यालय, सरकारद्वारा प्रायोजित कम्प्युटर नेटवर्क तथा शोध र शिक्षाको लागि इन्टरनेटको विकास गरियो । इन्टरनेटको विकास भएपछि बिस्तारै यसको महŒव र यसबाट हुने फाइदाको क्षेत्र देखा प¥यो र यो विश्वमा नै एउटा क्रान्तिको रूपमा फैलियो ।
इन्टरनेटले गर्दा कुनै व्यक्तिलाई निजी वा व्यापारिक कामको लागि घण्टौं यात्रा गरेर निश्चित ठाउँमा भेला हुने बाध्यता पर्दैन । भिडियो कान्फ्रेन्स, कालिङ्ग स्काइप वा अन्य कुनै अर्को माध्यमबाट आफ्नै ठाउँमा बसेर बैठक गर्न सकिन्छ ।
प्रारम्भिक चरणमा इन्टरनेटको गति के.बि.पि.एस.मा हुन्थ्यो र बिस्तारै यो एम.बि.पि.एस. मा परिवर्तन भयो तर आज यसको गति जि.बि.पि.एस.मा हुन्छ, जसले धेरै छिटो सूचना आदानप्रदान गर्ने काम गर्छ । नेपालमा यो सन् १९९४ मा छिरेको हो र सोही वर्षदेखि इमेल सेवाको शुरूआत मर्केन्टाइल कम्पनीले गरेको हो । सन् १९९५ देखि निजी कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा दिन शुरू गरे र अक्टोबर ४, सन् २०१९ देखि यो सेवा नेपालमा व्यापक भइरहेको छ ।
इन्टरनेट हेर्ने र त्यसमा भएको सूचना एकत्रित गर्ने कामलाई सर्फिङ भनिन्छ । इन्टरनेटको आफ्नै संसार छ र यससँग जोडिन तीनवटा स्तर हुन्छ । पहिलो उपभोक्ताले त्यहाँ भएको सूचना हेर्न सक्छ । दोस्रो उपभोक्ता स्वयं इन्टरनेटको आंशिक हिस्सा बनेर सूचना एकत्रित गर्नुको साथै आफ्नो वेबसाइट बनाउन सक्छ । तेस्रो उपभोक्ता स्वयं इन्टरनेट प्रणालीको हिस्सा बन्छ । आज इन्टरनेटले सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको डाटा कम्प्युटरीकृत गरेर ठूलो मात्रामा कागज र कागजमा गरिने कार्यलाई जोगाएको छ ।
यो मानिसलाई विज्ञानको सर्वश्रेष्ठ देन हो । यसबाट कुनै पनि सूचना, चित्र र भिडियो विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै पठाउन सकिन्छ । यसबाट ई–मेल पठाउन र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो विज्ञापनको एउटा सजिलो साधन हो । वास्तवमा यो एउटा सार्वजनिक सुविधा हो, जसको सहायताले मानिसलाई सफलता हासिल गर्न सजिलो भएको छ । यसको माध्यमले विश्व हाम्रो घर–आँगनमा सीमित भएको छ । यो शिक्षा, यात्रा र व्यापारमा धेरै उपयोगी छ । यसले हाम्रो पहुँचको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
यसको विशेषता र उपयोगिता नै यसको सफलताको कारण हो । प्रत्येक मानिसले यसको उपयोग आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि गर्छ । आज दुनियाँको कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ इन्टरनेटको उपयोग छैन । यो सूचनाको भण्डार हो । यहाँ हरेक प्रकारको सूचना उपलब्ध छ । आज विभिन्न प्रकारको कार्य गर्नको लागि यसको उपयोग गरिन्छ । जस्तै बिल जम्मा गर्न, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन शिक्षा, जागीरको लागि आवेदर्न, चलचित्र, कार्टून, कैयन प्रकारका खेल, बिहेको लागि केटा वा केटीको खोजी आदि ।
यसबाहेक विज्ञानको क्षेत्रमा पनि यसको महŒवपूर्ण भूमिका छ । अन्तरिक्षमा घटित हुने विभिन्न प्रकारको घटनाहरूको जानकारी पनि यसैबाट सबैलाई दिइन्छ । मौसमको जानकारी होस् वा अन्य जानकारी इन्टरनेटबाट सजिलै हासिल हुन्छ । यसको यसै विशेषताले गर्दा उपयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
यसको उपयोग हाम्रो लागि जति लाभदायक छ त्यतिकै यसको बढी उपयोग हाम्रो लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ किनभने जहाँ लाभ हुन्छ त्यहीं हानि पनि लुकेको हुन्छ । इन्टरनेटको सुविधाले गर्दा आज व्यक्तिगत जानकारीको चोरी बढेको छ । जस्तै क्रेडिट कार्डको नम्बर, बैंक खाता नम्बर आदि । यससँगै इन्टरनेटको प्रयोग आज सुरक्षा व्यवस्थाको लागि एक प्रकारको चुनौती बन्दै गएको छ ।
आज गोपनीय दस्तावेजहरूको चोरी बढेको छ । इन्टरनेटको माध्यमले घर बसीबसी सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिगत जानकारी–जस्तै तपाईंको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर आदिको गलत उपयोग हुने खतरा पनि हुन्छ । इन्टरनेटको बढ्दो उपयोगले गर्दा केही असामाजिक तŒवहरूले अर्काको कम्प्युटर प्रणालीमा नोक्सान पु¥याउनको लागि भाइरस पनि पठाउन थालेका छन् । इन्टरनेटको बढी प्रयोगले मानिस बिरामी पनि भइरहेका छन् ।
त्यहीं अर्कोतिर यसको लत लागेपछि यसबेगर एक दिन बिताउन गा¥हो हुन थालेको छ । इन्टरनेटको पोरोनोग्राफी साइटमा विद्यमान अश्लील सामग्रीले केटाकेटी र युवावर्गमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । यसले गर्दा अपराधमा वृद्धि भएको छ । हाम्रो समाजको लागि यो एक प्रकारको जहरजस्तै हो, जसको परिणाम हरेक दिन देखिन थालेको छ । यस कारण इन्टरनेटमा यस प्रकारको सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन जरूरी छ ।
आज मानिस परिवारमा बसेर कुरा गर्नुको साटो एक्लै बस्न रुचाइरहेका छन् जसले गर्दा पारिवारिक जीवन विच्छेद भइरहेको छ । आज मानिस आफ्नो व्यक्तिगत दस्तावेज इन्टरनेटमा सेभ गर्न थालेका छन् । यस कारण चोरी हुने खतरा पनि बढेको छ किनभने यसको प्रयोगले गर्दा धेरै प्रकारको गल्ती भइरहन्छ वा पासवर्ड लीक हुन्छ वा हैकरहरूले कम्प्युटर हैक गरी जानकारी हेर्न सक्छन् । इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोगले हाम्रो मन–मस्तिष्क र जीउमा दुष्प्रभाव पर्ने भएकोले चाहिएको बेला मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आजभोलि मोबाइल इन्टरनेटले समयको दुरुपयोग हुनुका साथै केटाकेटीहरूको अध्ययनमा पनि नराम्रो असर पारिरहेको छ । आज इन्टरनेटको माध्यमले कैयन प्रकारको गैरकानूनी गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जस्तै गोप्य जानकारी लीक गर्नु, झूटो समाचार फैलाइ दङ्गा गर्न उक्साउनु, आतङ्कवादी गतिविधि बढाउनु, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नु आदि ।
इन्टरनेट आज हरेकको जीवनको लागि महŒवपूर्ण छ । इन्टरनेट सूचनाको समूह हो, जसलाई सर्च–इन्जन र अन्य वेबसाइटको सहायताले प्राप्त गर्न सकिन्छ । आज सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, बैंक, अस्पताल, सानादेखि ठूला व्यापारमा इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ । नेपालका धेरैजसो ठाउँमा इंटरनेटको पहुँच छैन ।
खाँचो प्रत्येक मानिससम्म यसको पहुँच बढाउनु हो । इन्टरनेटको प्रयोग मात्र मनोरञ्जनको लागि गर्नु सही होइन, किनभने यसबाट हामीले कैंयन प्रकारका ज्ञान हासिल गरेर उच्च मुकामसम्म सजिलै पुग्न सक्छौं । यसको उपयोग समय खेर फाल्न नभई राष्ट्र विकासको लागि गर्नुपर्छ । यो विज्ञानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आविष्कार हो तर यसको दुरुपयोग भयो भने परिणाम अति गम्भीर र मानवता विरोधी हुन सक्छ । सत्य के हो भने यसले मानव इतिहासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने काम गरेको छ ।
Previous article२०७८ साउन ३१ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
Next articleवीरगंजमा साहित्य